YPS ကတ်အသုံးပြုနိုင်မည့် YBS ယာဥ်လိုင်းပေါင်း (၇)လိုင်း ထပ်မံတိုးချဲ့ | Yangon Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Yangon - Yangon Directory | Yangon Yellow Pages
USD Buy - 1,331 Sell -1,335
EUR Buy - 1,580 Sell - 1,598
SGD Buy - 980 Sell - 990
Getafree listing Hotline 09 448 001 662
YPS ကတ်အသုံးပြုနိုင်မည့် YBS ယာဥ်လိုင်းပေါင်း (၇)လိုင်း ထပ်မံတိုးချဲ့
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ခရီးသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း၌ ရန်ကုန်ငွေပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကတ် (YPS) ကို အသုံးပြုလျက်ရှိသော YBS ယာဉ်ကြီးများတွင် ကားပေါ်အတက်၌ တစ်ကြိမ်သာငွေဖြတ်နိုင်ရန် စတင်ဆောင်ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယခင်က YPS ကတ်အသုံးပြုမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် စက်ကိုနှစ်ခါဖြတ်ကာ သုံးခဲ့သော်လည်း ခရီးသွားပြည်သူများ၏ တောင်းဆိုမှုများကြောင့် စက်ကိုတစ်ကြိမ်တည်း ဖြတ်ကာ အသုံးပြုမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
လက်ရှိကာလ၌ အသစ်ထပ်မံတိုးချဲ့ထားသည့် YBS ယာဥ်လိုင်းပေါင်း (၇)လိုင်းရှိသည်။ယင်းယာဥ်လိုင်းပေါင်း (၇)လိုင်းမှာ….
Line 57 သခင်မြပန်းခြံ - လင်းစတောင်း (မြို့တွင်းပတ်)
Line 32 ထောက်ကြန့် - ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်
Line 97 ထောက်ကြန့် - စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
Line 97 ဘူတာကြီး - စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်
Line 93 ဘူတာကြီး - အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်
Line 94 ဘူတာကြီး - ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
Line 78 ဘူတာကြီး - ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် စသည့်ယာဥ်လိုင်းများ ဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ (၁၄)ရက်နေ့မှ စ၍ YBS (14, 38, 12, 25, 30) ယာဉ်လိုင်းများတွင် ရန်ကုန်ငွေပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကတ်(YPS)ဖြင့် တစ်ကြိမ်ငွေဖြတ် အသုံးပြုနိုင်ရန် ‌ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး (၂၀၂၁) ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်နေ့အထိ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထပ်မံတိုးချဲ့ထားသော ယာဥ်လိုင်း(၇)လိုင်းတွင်လည်း ထိုသို့ ကတ်အသုံးပြုမှုများ ရရှိစေရန် စီစဥ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဇူလိုင်လ(၂၁)ရက်နေ့မှစကာ YBS ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်း (၁၂) လိုင်းတွင် ရန်ကုန်ငွေပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကတ် ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဩဂုတ် (၈) ရက်နေ့တွင် ယာဉ်လိုင်းပေါင်း (၂၁) လိုင်းရှိ ယာဉ်အစီးရေ (၇၀၀) ကျော်တွင် ထပ်မံသုံးစွဲနိုင်ခဲ့ပေသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်မူ YPS ကတ်အသုံးပြုနိုင်သည့် ယာဉ်အစီးရေပေါင်း (၁၂၉၈) စီးရှိပြီး မကြာမီကာလအတွင်းတွင် ယာဉ်အစီးရေ (၁၆၀၀) ခန့်အထိ ထပ်မံသုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပေသည်။
Aye Myat Thinzar
Travel Yangon Trend Read 365 times
Popular Article in this Week
(၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
တစ်ပတ်စာ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
မိမိအိမ်မှာ အိမ်မြှောင်စုတ်ထိုးသံ ကြားရရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ
တစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီးများအတွက် ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
FLO Monitor Arms
in Furniture Marts
The Flo family of monitor arms possesses both award winning aesthetic design and functionality
Designed by Jeff Weber and Bill Stumpf for Herman Miller®
ရန်ကုန်ဈေးကွက်ရှိ ကျပ်သိန်း (၁၈၀) မှ သိန်း (၃၅၀) ကြား ကား (၁၀) စီး
ပြည်ပ လေကြောင်းလိုင်းများ ပျံသန်းပြေးဆွဲခွင့် ရပ်ဆိုင်းခြင်းကို ယခုနှစ်ကုန်ထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်
ရန်ကုန်-ပုသိမ် ကွန်ကရစ်လမ်းသစ် ပြီးစီးပါက (၃) နာရီကျော်ဖြင့် သွားလာနိုင်တော့မည်
Covid ကာလ လွန်မြောက်ရင် သွားကိုသွားသင့်တဲ့ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များ
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကောက်ခံသည့် လျှပ်စစ်မော်တော်ကား ဘီးခွန်နှုန်းထားများ
8th Floor, Bldg.(C), New Mingalar Market, Corner of Set Yone Rd (Mill Road) & Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp, Yangon Region, Myanmar.
© Copyright by MMRD